Ogbugbu aka nke Fatima ma ọ bụ Hamsa: pụtara, ihe atụ na ndị ọzọ! | Igbu egbugbu
Dị aka nke Fatima ma ọ bụ Hamsa, nke pụtara na ihe omimi
Maria José Roldan | | Ihe na egbugbu, Ogbugbu Okpukpe
Mgbe ọ nọ Igbu egbugbu anyị ekwuola na oge banyere Aka nke Fatima ma obu Hamsa, anyị ahụla na ọ dị mma ịrara otu isiokwu sara mbara na ụdị ụdị egbugbu a. Egbugbu nke, n'aka nke ọzọ, enwetawo ewu ewu na afọ ndị na-adịbeghị anya n'ihi akara ya na ihe ọ pụtara. Ka anyị cheta na akara aka nke Fatima ha nwere agwa di omimi nke n’eme ha obi uto. Ghara ikwu ụdị ya.
Aka Aka Fatima, Jamsa ma ọ bụ Hamsa (a sụgharịrị ise na Arabic) na-anọchite anya otu n'ime ihe ọdịnala ndị Alakụba kacha mara amara. Dị ka anyị na-ekwu na n'ihi ọdịdị omimi ya, ọ bụ nnukwu nkwupụta n'ime ụwa nke igbu egbugbu. Hamsa abụrụla kemgbe oge ochie site na ọdịnala ndị Alakụba iji gbalịa mee ka mba dị iche iche dịrị n'otu.
1 Ebe mmalite na ihe aka nke Fatima ma obu Hamsa
2 Ọnụnọ hamsa kacha mma na agba
3 Nakwa na mkpịsị aka gbasaa
5 Hamsa akara aka na Islam
6 Hamsa akara aka na okpukpe ndị Juu
7 Ihe ngosi aka nke Hamsa na Christianity
8 Ebee ka iji nweta akara aka aka Fatima?
9 Foto nke Tdị aka nke Fatima (Hamsa)
Ebe mmalite na ihe aka nke Fatima ma obu Hamsa
Ma gịnị bụ Mmalite, akara na nzube nke Aka Fatima ma ọ bụ Hamsa? Dịka anyị ga-ahụ ma emechaa, ọ bụ akara ngosi ọdịbendị ebe ọ bụ na, na mgbakwunye na ọdịbendị ndị Arab, anyị na-ahụkwa ya na nke ndị Juu. Ihe akara a bu aka mepere emepe nke apuru ihu otu anya. Mgbe nọ n'akụkụ mmetụta ndị Juu a na-akpọ ya Hamsa, na ndị Alakụba ndị ọzọ a na-akpọ ya "Aka nke Fatima".
Ọ bụ ezie na ihe omimi dị omimi ka edobere ya, rue taa, a ka na-atụle ọtụtụ echiche banyere isi mmalite nke akara ngosi a. N'otu aka anyị nwere onye nsọ dị nsọ nke Carthage, nke ndị Phencians ji mee ihe nnọchianya nke chi ha bụ Tanit. Na Mesopotemia (ihe anyị maara taa dịka Iraq) ọ nọchiri anya ya ihe nchebe nke mekwara ka ọmụmụ bawanye.
Mgbe a bịara n'igosi akara aka nke Fatima, anyị na-ahụ na ọ na-apụta mgbe niile na mkpịsị aka atọ agbatị, ebe ụfọdụ isi mkpịsị aka na obere mkpịsị aka na-agbagọ. Anya dị n’ime dị n’ọbụ aka bụ Anochiri anya ya ka dodge anya ojoo na ekworo. Dabere na ụfọdụ akụkọ mgbe ochie, Hamsa nọchiri anya ya iji kpuchido anyaụfụ, anya ọjọọ na agụụ ihe ọjọọ.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ka ha enweghị njikọ, ọ bụrụ na i lee anya nke ọma, ị ga-ahụ na ọtụtụ egbugbu Hamsa na-egosi n'akụkụ ụfọdụ azụ, nke a bụ n'ihi na a kwenyere na azụ bụkwa akara ngosi nchebe megide anya ọjọọ ma dọta ihe ọma chioma. Ọ bụ n'ụzọ dị otú a site na ijikọta ihe abụọ ahụ, a na-enweta nchebe dị ukwuu megide anya ọjọọ.
Ọnụnọ hamsa kacha mma na agba
Onwe m, akara aka ndị a na agba m. Ma ọ bụ n'ihi ọdịdị ya na nkọwapụta nke nkwụ nke aka Fatima, ị nwere ike igwu egwu na ọtụtụ agba iji nweta egbugbu na-ekpo ọkụ na-adọrọ anya. Dabere n'ụdị agba ejiri mee yana jikọtara ya, anyị nwere ike nweta nsonaazụ nke yiri nke okpokoro isi nke Mexico.
Na oji? Ee, na oji oji ndia a na-adikwa nma. Ọ bụ ezie na mụ onwe m na-ahọrọ ha na agba, enweghị m ike ịgọnahụ na n'ihe banyere ụmụ nwanyị, ọ bụrụ na ha egbue aka Fatima, na-eme ya na oji site na iji ihe nlezianya na nlezianya mee ihe, nsonaazụ ya bụ egbugbu mara mma ma ọbụkwa nke anụ ahụ. . Ọbụna na-adabere na ebe a na-egbu egbu onwe ya.
Nakwa na mkpịsị aka gbasaa
Aka hamsa nwere ike ịnọchite anya ya n'ụzọ abụọ:
Na mkpịsị aka gbasaa
Na mkpịsị aka emechi ọnụ
Ọ bụ kwuru na nke mbụ imewe nọchiri anya ike nke na-ewepụ ihe ọjọọebe nke ikpeazu bu akara nke oma.
Ogbugbu aka hamsa abughi nani ihe di egwu site na nhazi ya na odidi ya, mana akuku na omenala di ọgaranya na-akwadokwa ya. Ihe nnọchianya a sitere n'okpukpe dị iche iche, gụnyere, dị ka anyị kwurula, Alakụba, kamakwa site n'okpukpe ndị Juu na ọbụna Iso Christianityzọ Kraịst. Ojiji hamsa kachasị ochie laghachiri Iraq na mgbakwunye na iji ya dị ka nchebe na ọgụ site na anya ọjọọ, ekwenyere na onye ọ bụla nwere ya nwere nchekwa ọ bụla ebe ha na-aga. Nke a bụ ihe mbụ na isi ihe mere ọtụtụ ndị ji enwe hamsa n'aka na pendants, ọla aka, ọla ntị na ugbu a kwa na egbugbu, nke mere na ọ na-eso mgbe niile ma na-echekwa ha ebe ọ bụla ha na-aga.
Tụkwasị na nke ahụ, a na-eyi ma ọ bụ jidere aka hamsa n'ihi na ọ na-enyere aka izere ndị na-ezigara ike ha na anya ha n'ihi, dịka ọmụmaatụ, anyaụfụ ma ọ bụ iwe.
Anya na aka hamsa na-eme ka ihe nnọchianya nke nchebe pụọ na ihe ọjọọ sikwuo ike. Anya na-ezokarị anya anya Horus, nke pụtara na a ga-ele anyị anya mgbe niile yana n'agbanyeghị ebe ị zoro, n'ihi na ị gaghị enwe ike ịgbanahụ uche nke nghọta gị.
Site na hamsa a makwaara ya 'khamsa' nke bu okwu Arabic na pụtara 'mkpịsị aka ise' ma ọ bụ 'mkpịsị aka ise'. Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị na otu esi anabata akara ngosi a n'okpukpe dị iche iche maka ebumnuche dị iche iche. N'ụzọ dị ịtụnanya, nkọwa na ebumnuche niile na-agbadata otu nkọwa na nkọwa: nchekwa na nchedo site na ndị ọzọ na ume ọjọọ.
Hamsa akara aka na Islam
Ọ bụrụ n’iso Islam, ị ga - amata na mkpịsị aka mkpịsị aka ise nwere ike na-anọchi anya ogidi ise nke Islam. Ndị a:
Shahâda-E nwere nanị otu Chineke na Muhammad bụ onye ozi nke Chineke
Salat-ekpe ekpere 5 ugboro n'ụbọchị
Onyinye ebere nye ndi nkiti zakat-da
Sawm-ibu ọnụ na njide onwe onye na Ramadan
Ndị Hajj, ndị na-eleta Mecca opekata mpe otu oge n’oge ndụ ha
N'aka nke ọzọ, a makwaara akara a dịka Aka nke Fatima, na ebe nchekwa nke ada Muhammad bụ Fatima Zahra.
Hamsa akara aka na okpukpe ndị Juu
Ọ bụrụ na ị si n’ezinụlọ ndị Juu, mgbe ahụ a na-ekwenye na hamsa iji gosipụta ọnụnọ nke Chineke n’ihe niile dị n’ụwa a. A na - ejikwa mkpịsị aka aka ise nke akara a chetara onye na - egbu egbugbu ka o jiri uche ya ise too Chineke. Somefọdụ ndị Juu kwenyere na mkpịsị aka mkpịsị aka ise na-anọchi anya akwụkwọ ise nke Torah. A makwaara ya dị ka Miriam, nwanne Mozis nke tọrọ ya.
Ihe ngosi aka nke Hamsa na Christianity
N'ihe banyere Iso Christianityzọ Kraịst, ụfọdụ akwụkwọ na-ekwu na hamsa aka bụ aka nke Virgin Mary ma gosipụta nwanyị, ike na ike. Ọtụtụ oge, a na-etinyekwa akara nke azụ Ndị Kraịst yana atụmatụ a dị ka mpụga anya azụ (Ichthys). A na-ewere ya dịka akara nke Kraịst. N’obodo ụfọdụ, ekwere na azụ adịghị mma n’anya ọjọọ.
Ọ baghị uru ọdịbendị ị nwere, ihe okpukpe gị bụ ma ọ bụ nkwenkwe gị, ihe dị mkpa bụ na ọ bụrụ na ị na-egbu aka gị hamsa ị maara na ọ bụ maka gị ọ pụtara ihe na na enweghị mgbagha, ị ga-eyi ya egbugbu na otutu mpako. Ọfụma, nchebe, nchekwa na ezinụlọ bụ ihe kachasị mkpa maka egbugbu a mara mma nke ọtụtụ ndị hụrụ n'anya.
Ebee ka iji nweta akara aka aka Fatima?
Banyere akụkụ nke ahụ ka na-adọrọ mmasị karị igbu egbugbu nke aka Fatima ma ọ bụ HamsaỌ bụrụ na anyị leba anya na gallery nke ihe oyiyi dị n'okpuru, ị ga-ahụ na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na-ahọrọ ime ya na azụ, olu ma ọ bụ n'otu akụkụ nke igbe ahụ. Ee, enwere ndị na-anwa anwa igbu ya na aka ha, mana otu saịtị edepụtara n'elu ka mma.
Anyị ga-eburu n’uche na ọ bụ egbugbu ga-enwerịrị ọkara ma ọ bụ buru oke ibu iji nwee ike ịghọta nkọwa ya niile n’ụzọ dị mfe karị. Ma ọ bụghị ya, ụfọdụ n'ime anwansi ya efuola. Ọ na-adọrọ mmasị ijikọta ya na ihe ndị ọzọ? Ọfọn, ebe n'ọnọdụ ndị ọzọ, m na-atụkarị aro ka ijikọta isi imewe na ihe ndị ọzọ, na nke a, akara ndị a zuru oke n'agbanyeghị na-eme naanị ha.
Ọ dị mma ugbu a Anyi aghaghi iburu n’uche na egbugbu nke aka Fatima kariri aka di nfe nke nwere mkpisi aka ato na nke abuo gbagoro.. Dịka anyị kwurula n'isiokwu ndị bu ụzọ, a ga-etinye ụdị ihe ndị ọzọ dịka anya dị n'ime ya na obere obere azụ ga-enyekwa mmetụ mbụ anyị na egbugbu anyị. N’etughi ogha n’iru, anyi hapuru gi gallery di iche-iche nke egbugbu nke aka Fatima ka inwee ike nweta echiche gi.
Foto nke Tdị aka nke Fatima (Hamsa)
N'okpuru ị nwere ọtụtụ Foto foto nke egbugbu na Aka nke Fatima Yabụ ị nwere ike nweta echiche nke mpaghara na ụdị nke ị nwere ike igbu ya:
Naanị maka nnukwu ọhụụ: otu esi egbu egbugbu na XNUMX dị mfe
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ofdị egbugbu » Ihe na egbugbu » Dị aka nke Fatima ma ọ bụ Hamsa, nke pụtara na ihe omimi
Egbugbu a hụrụ m n'anya. Are bụ? M hụrụ ihe ọ pụtara n'anya, ọ pụtakwaraara m.
Zaghachi Melissa Rojas
Ama ahụ enyerela m aka nke ukwuu ma site taa, enwere m gị ihu. Daalụ!
Ndewo, m hụrụ egbugbu n'anya, ego ole ka ọ ga-efu ma ọ bụ obere?
Amaghị m ma ọ bụrụ na ịmebeghị ya, mana jụọ ma ọ ga-efu karịa ma ọ bụ obere dollar 60, mana nke ahụ dabere na mpaghara (mba ị si)
Onwere onye ga agwa m ihe egbugbu a putara mana anya ji anya mmiri
Enwerem ajuju nke juputara na mmasi, achorom otutu ihe banyere egbugbu a, mana m na ele anya na atumatu ndi nwanyi, nwoke puru ime ya? Ọ ga-amasị m ime ya, mana ọ dị m ka ọ bụ karịa nke egbugbu nwanyị ...
Edemede mara mma nke na-asọpụrụ onyonyo a. Ezigbo nkọwa na nyocha nke akara nke ya n'ozuzu ya na nke ihe ndị mejupụtara Aka nke Fatima ma ọ bụ Hamsa na ịbịaru site n'okpukpe dị iche iche. Mgbe m gụsịrị ma ghọta ihe ọ pụtara, ugbu a, ọ bịara na-atọ m ụtọ iyi ụdị egbugbu a. Daalụ.
Zaghachi Nela Zavala
Ọ bụ egbugbu mara mma nke ukwuu ebe ọ bụ na akụkọ ntolite ya nwere ọtụtụ ihe na ihe ọ pụtara maka onye ọ bụla nwere ya, obi dị m ụtọ ịnwe mpempe akwụkwọ a magburu onwe ya
Kpụrụ egbugbu: ka echiche gị fee
Ezobe ezoro ezo maka ụmụ nwanyị: ihe nzuzo naanị gị ga - ama